IPoland neNetherlands ziya kujoyina iqela le-Apple Pay ngaphambi kokuphela konyaka | Ndisuka mac
IPoland neNetherlands bajoyine iqela le-Apple Pay ngaphambi kokuphela konyaka
Xa kwakubonakala ngathi iindaba ezinxulumene neApple Pay ziphelile, besithetha ngeveki yonke malunga nale teknoloji yokuhlawula ngaphandle kwamacingo evela kwaApple, itekhnoloji esiyipapashe kule veki izakufika kungekudala eIndiya. Kodwa kuqala uya kuyenza eNorway, ilizwe apho Ukuhlawulwa kweselfowuni kuphantse kuyimbopheleleko phakathi kwabemi bayo. Kodwa iNorway ayizukuphela kwelizwe eYurophu eliza kubona ukuba abasebenzisi be-iPhone bazokwazi kanjani ukuqala ukusebenzisa izixhobo zabo njengendlela yokuhlawula, kuba ngokwamarhe amatsha iPoland neNetherlands ziya kuba nakho ukonwabela obu buchwephesha bokubhatala ngaphambili ukuphela konyaka.
Njengoko iAppleInsider ifundile, Ibhanki yasekhaya yasePoland iPKO Bank Polksi sele ivavanya iApple Pay kwaye ingaqala ukuxhasa ngaphambi kokuphela konyaka. Kumfanekiso ongentla, sinokubona ikhadi elivela kule bhanki kwisicelo seWallet silungele ukusetyenziswa kwintengiselwano.
Ukuba ibhanki ekhethiweyo ePoland ibiyi-PKO Bank Polksi, eNetherlands iya kuba yi-ING, Ibhanki ngokungangqinelaniyo ikwafumaneka eSpain, kodwa okwangoku ayiziphenduli izicelo zomsebenzisi malunga nokufika kwenkonzo yayo eSpain. Ukongeza kwi-ING, eNetherlands le nkonzo iya kuthi ihambelane nebhanki yesibini ngobukhulu elizweni iBunq, ngelixa ibhanki yesithathu ngobukhulu elizweni, iRabobank, isithi ukwamkelwa kwayo akukacwangciswa.
Umhla ocwangcisiweyo wokuphehlelelwa kweApple Pay eNetherlands nguNovemba 2 olandelayo, Ngemini enye iApple eza kuzisa iziphumo zayo zoqoqosho kwikota yokugqibela yonyaka-mali ka-2017 kwaye bavala ngayo unyaka-mali omnye. Okwangoku iDenmark neFinland zisesechwebeni esomileyo zilinde ukubona ukuba iibhanki zelizwe zithatha phi kwaye zinika iApple Pay. U-Luca Maestri, i-CFO ka-Apple, ubhengeze ukuba ukufika kwe-Apple Pay kula mazwe bekusondele kwinkomfa yeziphumo zenkampani zokugqibela, kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPoland neNetherlands bajoyine iqela le-Apple Pay ngaphambi kokuphela konyaka
Ndiyathanda ukuba amazwe aqhubeke nokujoyina le ndlela yokuhlawula, ilunge kakhulu kwaye iyakhawuleza.
Ukusuka kubadali beFantastical, kuza iCartshop yolawulo loqhakamshelwano
Ke unokwenza ikopi iyonke yeefoto kunye neevidiyo zeThala leeNcwadi le-iCloud kwi-Mac yakho